XOG+DAAWO: Maxaa keenay Khilaafka Puntland & Nabad iyo Nolol?
MUQDISHO(P-TIMES)- Shaki maleh in uu hadda gaaray halkii ugu xumeyd khilaafka u dhaxeeya Madaxtooyada Puntland & Madaxtooyada Soomaaliya, wuxuuna ahaa mid soo taxnaa tan iyo markii uu xilka qabtay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo aysan qabashadiisa jecleysan Madaxda Federaalku.
Walaaca ay ka qabaan in uu Siciid Deni katirsaneyn kooxda Nabad iyo Nolol, aragti ahaana aad uga fog yahay ayaa keenay in ay Xukuumadda Soomaaliya bilowdo dadaal ay ku xagal-daacinayso, waxayna waqti badan galisay sidii uusan u guuleysan laheyn.
Shirkii Garoowe ee ay Puntland u qabatay dhinacyada Siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jireen Madaxda dawladda Soomaaliya, wuxuu sii kordhiyey dagaalka ka dhaxeeyey labada dhinac, Puntland waxay xiligaas joojisay wada shaqeynta ay la leedahay dawladda Faderaalka.
Laakiin taasi ma noqon mid hirgasha, maadaama wasiirada labada dhinac ay maalin kasta iskugu tagaan Garoowe ama Muqdisho, taas oo ka dhigan in aysan wali Xukuumada Puntland si dhameystiran uga hakan howlaha dawladda Faderaalka.
HALKAN KA DAAWO FAAHFAAHINTA
Safarkii Raysalwasaare Kheyre uu ku tagay magaalada Gaalkacyo wuxuu kiciyey hurgumooyin aasnaa, waxaana banaanka u soo baxay heerka labada dhinac ay kala joogaan, waxaana iska muuqatay in ay Nabad iyo Nolol tijaabinayeen awoodooda.